ရှန်ဟိုင်းမြို့ COVID-19 ရောဂါမြင့်တက်နေချိန်တွင် E-commerce ပလက်ဖောင်းများက နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ မှာယူမှုအတွက် ကူညီပေး - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ Burger King အရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ အလုပ်သမားတစ်ဦးက အွန်လိုင်းမှာယူမှုများအား ပို့ဆောင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်နေသည်ကို ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုအား ရင်ဆိုင်တိုက်ဖျက်နေချိန်တွင် များပြားသော e-commerce လုပ်ငန်းကြီးများ နှင့် အစားအစာပို့ဆောင်ရေး ပလက်ဖောင်းများ အရေအတွက် အတော်များများသည် ရှန်ဟိုင်းမြို့၏ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ မှာယူမှုတွင် စိတ်ချအာမခံမှုရှိစေရန် ပူးပေါင်းခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ ဆေးဝါးအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ အလုပ်သမားတစ်ဦးက အွန်လိုင်းမှာယူမှုများအား ပို့ဆောင်ရေးအတွက် ဆေးဝါးများပြင်ဆင်နေသည်ကို ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ ပို့ဆောင်သူတစ်ဦးက ဆေးဝါးအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ အွန်လိုင်းဆေးဝါးမှာယူနေသည်ကို ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ အစားအစာရောင်းချသည့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ အလုပ်သမားများက အွန်လိုင်းမှာယူမှုများအတွက် အစားအစာများ ပြင်ဆင်နေသည်ကို ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ အစားအစာရောင်းချသည့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ အလုပ်သမားများက အွန်လိုင်းမှာယူမှုများအတွက် အစားအစာများအား ထုတ်ပိုးနေသည်ကို ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ အလုပ်သမားတစ်ဦး အွန်လိုင်းမှာယူမှုများအတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအား ထုတ်ပိုးနေသည်ကို ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ Burger King အရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ အလုပ်သမားတစ်ဦးက အွန်လိုင်းမှာယူမှုများအတွက် အစားအစာများအား ထုတ်ပိုးနေသည်ကို ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
JD.com ကဲ့သို့သော e-commerce လုပ်ငန်းကြီးများ ၊ အွန်လိုင်းအစားအစာပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းများ ဖြစ်သည့် Meituan နှင့် Eleme နှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများက ဒေသခံများအတွက် နေ့စဉ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များအား ထောက်ပံ့ပေးရန် ရှန်ဟိုင်းမြို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။
လူဦးရေ ၂၅ သန်းရှိသော ရှန်ဟိုင်းမြို့သည် ယခုအခါ ဗိုင်းရပ်စ်အား ရင်ဆိုင်တိုက်ဖျက်နေသည့် ဦးစားပေးစစ်မြေပြင်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဧပြီ ၉ ရက်တွင် ပြည်တွင်းရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ၂၀,၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့သည်။ ရှန်ဟိုင်းမြို့သည် မြို့လုံးကျွတ် nucleic acid စစ်ဆေးမှုအကြိမ်ရေများစွာနှင့်အတူ ယာယီ အများနှင့်‌ရောနှောဆက်ဆံခြင်း မပြုသော သီးခြား စီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာအား ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။
“ကျွန်တော် အိပ်မပျော်တာ ရက်တော်တော်ကြာပါပြီ။”ဟု တရုတ်နိုင်ငံရှိ အဓိကအမြန်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည့် YTO Express ၏ ဌာနခွဲခေါင်းဆောင် Cai Xiaobing က ပြောကြားခဲ့သည်။ Cai သည် ဧပြီ ၄ ရက်မှစတင်ကာ ရပ်ရွာအခြေပြုစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း နေထိုင်သူများအတွက် အစားအစာများ ထောက်ပံ့ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Cai ၏ ဇနီးဖြစ်သူသည် နံနက်တိုင်း အွန်လိုင်းဖြင့် ဈေးဝယ်သည့်အုပ်စုအား စီစဉ်ပြီး Cai က ရောင်းချသူများအား ဆက်သွယ်ကာ ကုမ္ပဏီ၏ ယာဉ်မောင်းများအား ဒေသခံများထံသို့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေရန် စီစဉ်ပေးကြောင်း သိရသည်။
Cai က နေ့စဉ်ထောင်နှင့်ချီသော နေထိုင်သူများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ပေးရေး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော် မနက် ၂ နာရီလောက်မှာ ရပ်ကွက်တစ်ခုကို ဆန် ၁၅၀ ကီလိုဂရမ် ပို့ဆောင်ဖို့ ကားမောင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ ဂျုံမှုန့်အိတ် ၅၀၀ က နှစ်မိနစ်လောက်နဲ့ပဲ ကုန်သွားခဲ့ပါပြီ။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်သူများ ပါရှိသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အား ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် ၆ ဦးမှ ၄၀ ဦးအထိ ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် တစ်ရက်လျှင် ၁၀ နာရီကျော် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
JD ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Wang Wenbo က ရှန်ဟိုင်းမြို့သူ/သားများ၏ လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်တင်းရန် နိုင်ငံအနှံ့မှ ကုန်ပစ္စည်းများကို စုဆောင်းနေကြောင်း ၊ ကလေးနိုမှုန့် ၊ ကလေး ခါးတောင်းကျိုက်ပိတ်စများ ၊ ဆေးဝါးများ ၊ ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ နှင့် သိုးသားများ အပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်းပထမအသုတ်သည် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကုမ္ပဏီသည် ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ ဝန်ဆောင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေးရန် ပစ္စည်းပို့ဆောင်သူများအပါအဝင် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး အလုပ်သမား ၂,၀၀၀ ကျော်အား စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း ၊ ရှန်ဟိုင်းမြို့သို့ အလုပ်သမားများ ပိုမိုစေလွှတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း Wang က မှတ်ချက်ပြုသည်။ အခြေအနေအမျိုးမျိုး၌ မောင်းသူမဲ့ အသုံးချနိုင်စွမ်းရှိသော ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များအား ရှန်ဟိုင်းမြို့၏ အများနှင့်‌ရောနှောဆက်ဆံခြင်း မပြုသော သီးခြားနေရာများတွင် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ ပို့ဆောင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းအစားအစာပို့ဆောင်ရေး ပလက်ဖောင်း Eleme ၊ ကုန်ပဒေသာဆိုင်ကြီးဆိုင်ခွဲ RT-Mart နှင့် Cainiao ကွန်ရက် ၊ အလီဘာဘာ၏ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရုံးခွဲတို့ကလည်း ၎င်းတို့သည် ဒေသခံလုပ်သားများ ပိုမို၍ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်ဝင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
SHANGHAI, April 10 (Xinhua) — An increasing number of e-commerce giants and food delivery platforms have joined in the battle against the resurgence of the Omicron variant in Shanghai to secure the megacity’s daily supplies.
“I haven’t sleptawink for days,” said Cai Xiaobing, head ofabranch of YTO Express,amajor express delivery firm in China. Cai has becomeacommunity volunteer since April 4, providing food for residents in the neighborhood of his community.
Cai’s wife organizes online group buying every morning, and Cai contacts sellers and arranges the company’s drivers to distribute the goods to residents door-to-door.
“I even drove toacommunity to deliver 150 kg of rice at around2a.m. And just now, 500 bags of flour sold out in merely two minutes,” he said, addingavolunteer team consisting of deliverymen has grown from six to 40, and they need to work more than 10 hours per day.
Wang Wenbo, vice president of JD, said that JD is sourcing goods from nationwide to meet Shanghai citizens’ needs. The first batch of goods, including infant milk formula, diapers, medicines, epidemic prevention materials and mutton, have arrived.
The company has dispatched more than 2,000 anti-epidemic workers including delivery people to provide services in Shanghai. More workers are expected to be deployed there, Wang noted, adding unmanned intelligent delivery vehicles will carry out contactless delivery in Shanghai’s closed-off areas.
Online food delivery platform Eleme, superstore chain RT-Mart, and Cainiao Network, Alibaba’s logistics arm, also said they are organizing more local employees to return to work. ■
Photo 1 – An employee prepares online orders for delivery ataBurger King store in east China’s Shanghai, April 10, 2022. (Xinhua/Chen Jianli)
Photo2– An employee prepares medicine for an online order atadrugstore in east China’s Shanghai, April 10, 2022. (Xinhua/Chen Jianli)
Photo3– A delivery man takes an online medicine order fromadrugstore in east China’s Shanghai, April 10, 2022. (Xinhua/Chen Jianli)
Photo4– Employees prepare food for online orders atafood store in east China’s Shanghai, April 10, 2022. (Xinhua/Chen Jianli)
Photo5– Employees pack food for online orders atafood store in east China’s Shanghai, April 10, 2022. (Xinhua/Chen Jianli)
Photo6– An employee packs vegetables for online orders atasupermarket in east China’s Shanghai, April 10, 2022. (Xinhua/Chen Jianli)
Photo7– An employee packs food for an online order ataBurger King store in east China’s Shanghai, April 10, 2022. (Xinhua/Chen Jianli)
Photo 8 – An employee packs vegetables for online orders atasupermarket in east China’s Shanghai, April 10, 2022. (Xinhua/Chen Jianli)